Waa maxay Xeerka Ilaalinta Caafimaadka Taranku Adiga: 1 Luuliyo iyo Wixii Ka Dambeeya ... - Xarunta Daryeelka Kaniisadda ee Falls
Waa maxay micnaha Sharciga Ilaalinta Caafimaadka Taranka ee adiga: July 1 iyo Beyond
Bishii Abriil 2020, Guddoomiyaha Northam wuxuu saxiixay Sharciga Ilaalinta Caafimaadka Taranka (RHPA) sharci - sharci kaas duub dib xaddidaadyo qaarkood oo la saaray daryeelka ilmo soo rididda ee Dawlada Dhexe ee Virginia ku dhowaad toban sano ka hor. Marinka RHPA ee loo maro Virginia House iyo Senate iyo guud ahaan miiska gudoomiyaha waa guul xaqiijineysa xuquuqda dadka uurka leh ee ku nool Virginia si ay go'aan uga gaaraan jirkooda iyadoon gobolka ka dhexeyn iyaga iyo xirfadlayaashooda daryeelka caafimaad. Anaga FCHC ahaan waxaan ku faraxsanahay inaan qeyb ka noqonay howsha si aan u xoojino muhiimada RHPA u leedahay sharci dejiyeyaasha iyo codbixiyaasha Virginia.
Waa kuwan waxa ka mid ah waan nahay sugaya FCHC 1da Luulyo marka RHPA ay dhaqan gasho:
Waxaan ku laabaneynaa qaabkii aan ugu soo dhaweynay bukaanka daryeelka ilmo soo rididda hal booqasho kaliya sidii markii aan furnay 2002. Laga bilaabo bisha Luulyo 1 bukaanada lama sii deyn doono 24 saac oo sugitaan ah inta udhaxeysa booqashooyinka Xarunteena. FCHC way awoodday inay sidaa sameyso si badbaado leh oo xilkasnimo leh booqasho hal mar ah illaa xaddidaadda 2011. Tani waxay ka faa'iideysanaysaa bukaankeenna iyadoo la ilaalinayo waqti iyo ilo. Taas macnaheedu waxa weeye inaadan mar dambe qaadanin maalin shaqo oo dheeri ah. Ama si aad u hesho gaadiid ku taga Xarunteena maalin dheeraad ah. Ama si loo ilaaliyo xanaanada caruurta maalintaas dheeriga ah. Dhammaan waxay ka dhigayaan daryeelka ilmo soo rididda mid ay u heli karaan bukaannadeenna iyo kuwa doorta.
Waxaan fursad u heli doonnaa inaan mudnaanta siino waqti dheeri ah iyo ilo dhaqaale oo ku saabsan daryeelka bukaanka. Waxaan hadda haysannaa fursado badan oo aan ku siin karno bukaannadeenna daryeelka iyo taxaddarka ay mudan yihiin. Dhawrkii sano ee la soo dhaafey, FCHC waxay ku qasbaneyd inuu ka boodo qoob-ka-soo-baxyo gaar ah oo loo igmaday 2011-kii oo uu sharciyeeyay Gobolka Virginia. RHPA ayaa ka saareysa xayiraadahaas!
Hada Ultrasound wuxuu noqon karaa go'aan kaligiis laqaato inta udhaxeysa bukaan socodka iyo daryeel bixiyaha maadaama had iyo jeer uu ahaa qeyb kamid ah daryeelka bukaanka .. Go'aanka waxa u fiican bukaanka mar dambe kama amar qaadan doonaan Sharci Dejinta; taa badalkeed, waxay ku salaysnaan doontaa wadahadal dhexmara bukaanada iyo dhakhtarkooda waxayna u oggolaaneysaa go'aannada shaqsiyadeed ee bukaankeenna. Waxaan ugu dabaaldegnaa bukaankeenna inay leeyihiin madax-bannaanidooda iyo oggolaanshahooda ku saabsan jirkooda iyo daryeelka caafimaad ee taranka.
Inta lagu jiro hagaajinta COVID iyo ixtiraamka bukaannadeena waqtiga waxaan awood u yeelan doonnaa inaan ka shaqeyno yareynta waqtiga bukaannadu u baahan yihiin inay ku jiraan xaruntayada .. Fursado badan oo lagu dhammaystiro waraaqaha qaadashada iyo xulashada macluumaadka ku saabsan daryeelka ilmo iska soo rididdooda khadka tooska ah, bukaanku waxay jadwal u sameyn karaan ballantooda waxayna isu diyaarin karaan inta lagu jiro saacadaha ka baxsan guriga halkii ay sugi lahaayeen inta la shaqeynayo inta ay ku sugayaan hoolkayaga. Gaar ahaan xilligan COVID waxaan raadineynaa inaan bukaan socodka ka dhigno mid caafimaad qaba, aamin ah oo dabacsan intii suurtagal ah maadaama aan raaceyno tilmaamaheena kala fogaynta jireed ee xaruntayada.
Maaddaama aan nahay xarun daryeel caafimaad oo madax bannaan, waxaan la shaqeynaynay dhammaan shaqaalaheena si aan u go'aansanno sida ugu wanaagsan ee loogu adeegi karo bukaankeenna fursadaha noo furmi doona. Waxaan go'aamineynaa sida tan ay u ballaarin karto fursadahayaga jadwalka iyo fursadaha wadatashiga fog! Waan hubin doonnaa inaan ku sii ogeysiinno markaan soo bandhigeyno oo aan soo bandhigeyno isbeddelladan si aan u siino fursadaha ugu wanaagsan ee ugu macquulsan bukaankeenna.
Waan ku faraxsanahay isbeddeladan - waxaana rajeyneynaa inaad adiguna sidoo kale tahay!
qoraal hore Fiiri fiidiyowyadeena - oo ku soo wareeji Xarunteena!
boostada soo socota Fiiri fiidiyowyada cusub!